यस्ता छन् क्वाँटी खाँदा पाइने छ तत्व | Nepali Health
२०७६ साउन ३० गते ६:३० मा प्रकाशित
आज रक्षा बन्धन वा भनौँ जनै पूर्णिमा । काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न जाती समुदायबीच क्वाँटी खाने चलन छ । टुसा उम्रेको विभिन्न गेडा गुडीबाट मिश्रित क्वाँटी स्वादमा मिठो त हुन्छ नै पोषणमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । आखिर के फाइदा हुन्छ त क्वाँटी खाँदा ? आज हामी तपाईँलाई बताउनेछौँ ।
नौ प्रकारका गेडागुडीको मिश्रणबाट क्वाँटी बन्छ । यो मिश्रणलाई चार दिन भिजाएर टुसा उम्रिएपछि बिशेष गरी जनैपूर्णिमाका दिन खाने गरिन्छ । मस्याङ, चना, मुगी, बोडी, ठूलो सिमी, मास, भट्ट, ठूलो केराउ, सानो केराउ मिसाएर टुसा उम्रेपछि पकाइने यो मिश्रणले शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ । यो मिश्रणमा शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ ।
१. क्वाँटीमा टुसा पलाएका गेडागुडी हुनाले तिनमा रेसाको मात्रा पनि बढी हुन्छ । कब्जियतको समस्या हुनेले रेसादार खाना खाएमा धेरै फाइदा पुग्छ । क्वाँटीले पनि कब्जियतको समस्या भएकालाई धेरै फाइदा हुन्छ ।
४. क्वाँटी खानाले रक्तसञ्चार तथा स्नायु प्रणालीलाई पनि धेरै फाइदा पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । क्वाँटीको नियमित सेवनले स्मरणशक्ति पनि बढ्छ । यसले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
६. लामो समय भिजेकाले गेडागुडीलाई हाम्रो शरीरले सहजै पचाउन सक्छ । यसले हाम्रो पाचनशक्तिमा पनि सुधार ल्याउँछ । त्यस्तै, यी गेडागुडीमा हुने सबै पौष्टिक तत्त्व शरीरले लिन सक्ने भएकाले सौन्दर्यमा पनि निखार ल्याउन मद्दत पुग्छ ।